Egwu ahia kacha mma na February 2021 - Kedu ahia ahia kachasị mma maka gị?
Ngwa ahia kacha mma 2021 - Kedu ahia ahia kachasị mma maka gị?
eToro - Platform of Trading kacha mma maka ndi n’ebido
Oghere itinye ego na ntanetị etolitego na oke elu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Nke mbụ, anyị mere mgbanwe site na onye na-ere ahịa na-esite na ekwentị gaa na nke usoro ntanetị n'ịntanetị nke na-enye gị ohere ịzụta ma ree akụ sitere na nkasi obi nke ụlọ gị. Ma ugbu a? Ngwa ahia ahia.
Site na iji onye na-ere ahịa n’ịntanetị nke na-enye ngwa ahia ngwa ngwa ngwa ngwa, ị nwere ike ịnweta ọtụtụ puku akụrụngwa ego na pịa bọtịnụ. Ma nke ahụ bụ ebuka na mbak, Forex, commodities, indices, ma ọ bụ cryptocurrencies - ịzụ ahịa na njem anaghị adị mfe.
Na nke ahụ kwuru, enwere ọtụtụ narị ngwa ahịa azụmaahịa na-arụ ọrụ n'ahịa, yabụ ịmara onye na-ere ahịa na-aga adịghị mfe. Dị ka ndị dị otú ahụ, anyị ga-atụ aro ka ịgụrụ anyị nduzi miri emi na Ngwa ahia kacha mma nke 2021.
Mara: Ọ bụrụ n’ịchọrọ itinye aka na nyocha teknụzụ dị elu, ị nwere ike ị kachasị mma ịme nke a n’elu ikpo okwu desktọọpụ ma ọ bụghị obere ihuenyo mkpanaka.
Kedu ihe bụ ngwa ahia?
Na nkenke, ngwa ahia na-enye gị ohere ịzụ ahịa na ngwaọrụ mkpanaka. Ya mere, ọtụtụ n'ime atụmatụ ndị dị na desktọọpụ desktọọpụ trading saịtị ga-enwe ike inweta site na gị trading ngwa. Ọ dị mkpa iburu n'obi na ngwa ahia abụghị naanị ebe a na-etinye ego. Site na nke a, anyị na-ekwu na ngwa ahụ ga-abụ akụkụ nke ọrụ ịgbanyekwu sara mbara.
Ọmụmaatụ, ị ka ga na-eji a omenala online ore, albeit, na ore ahia ga-enye a n'ụzọ zuru ezu-fledged trading ngwa n'akụkụ ya desktọọpụ n'elu ikpo okwu. Nke a na - enye gị ihe kachasị mma nke ụwa abụọ. Ọ bụ ezie na ị ga-enwe nhọrọ nke ịzụ ahịa na njem, ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nyocha nke ọma, ị nwere ike ime nke a na nnukwu ihuenyo site na saịtị desktọọpụ.
Kedu uru na ọghọm nke iji MT4 Broker?
Ahia na-aga 24/7
Echefula ohere ahia
Wepu ahia ozugbo ahia ndi ozo
Ofụri Esịt kachasị maka obere nha ihuenyo
Enyele niile nke otu atụmatụ dị na isi desktọọpụ saịtị
Nkwụnye ego ma wepụ ego na pịa bọtịnụ
O siri ike ime nyocha omimi nke ọma na obere ihuenyo
Naanị dakọtara na gam akporo na iOS ngwaọrụ
Kedu ka ngwa ahia si arụ ọrụ?
Ọ bụrụ na ịnwetụbeghị ngwa ahịa tupu oge eruo, ị kwesịrị ịmara na usoro a dịka otu ọkọlọtọ ahia n'ịntanetị ikpo okwu. Na nke ahụ kwuru, n'okpuru anyị edepụtara usoro ndị ị ga - agbaso iji nweta ọrụ azụmaahịa mkpanaka gị na ụkwụ aka nri.
Nzọụkwụ 1: Họrọ Mobile Trading App
Nke mbụ, ị ga - ahọrọ ọnye ntanetị nke na - egbo mkpa gị. Ma ọ dịkarịa ala, ịkwesịrị ijide n'aka na onye na-ere ahịa na-enye ngwa ahịa nke kwekọrọ na ngwaọrụ mkpanaka gị. Ọtụtụ mgbe, nke a ga-ekpuchi ma gam akporo na iOS arụmọrụ ụdị.
Agbanyeghị, ịkwesịrị ileba anya n'ihe ndị ọzọ dị nnọọ ngwa mkpanaaka. Nke a kwesịrị ịgụnye metrik dị ka iwu, ụgwọ azụmaahịa, mgbasa, ịkwụ ụgwọ, na ọrụ ndị ahịa.
Mara: Anyị enyela akụkụ dị omimi banyere otu esi ahọta ngwa ahịa azụmaahịa na-agbada na ntuziaka anyị. Anyị edekwala ndepụta 5 kachasị elu anyị na njedebe nke ibe a ma ọ bụrụ na ịnweghị oge iji mee nyocha gị!
Nzọụkwụ 2: Download na Wụnye App
Ozugbo ị họrọla onye na-ere ahịa nke na-ezute mkpa gị, ị ga-ebudata ngwa ahụ na ekwentị gị. Nwere ike ịchọta ngwa ahụ site na ebe nrụọrụ weebụ desktọọpụ mbụ nke onye na-ere ahịa na ajụjụ, ma ọ bụ site na ịchọ ya site na Playlọ Ahịa Google ma ọ bụ iTunes.
Otú ọ dị. anyị ga-atụ aro ka ị na-eme ihe mbụ, dịka ịchọrọ ijide n'aka na ị na-ebudata ngwa ọrụ gọọmentị, ma ọ bụghị nitationomi. Ozugbo nbudata nbudata zuru ezu, wụnye ngwa ma malite usoro mmeghe akaụntụ.
Kwụpụ 3: Mepee Akaụntụ
Ga ugbu a mkpa imeghe akaụntụ na gị họọrọ online trading n'elu ikpo okwu. Nke a ga-ebu ụzọ chọọ ka ị banye ụfọdụ ozi nkeonwe nke mere na onye na-ere ahia maara onye ị bụ.
Nke a ga-agụnye:
National Insurance Number ma ọ bụ Tax Identification Number
Ikwesiri ịnye ụfọdụ ozi gbasara ọnọdụ ọrụ gị. Nke a ga - agunye gi ụgwọ ọnwa gị, yana ụdị ụlọ ọrụ ị na - arụ ọrụ. Also ga - achọkwa ka onye na - ere ahịa mara ihe ọrụ azụmaahịa gị na - ekpuchi - dịka ụdị akụ ị gbanwere na mbụ, yana nkezi nha ahia gi.
Kwụpụ 4: Nyochaa njirimara gị
Mara dị ka KYC (Mara Onye Ahịa Gị), achọrọ ka ndị ahịa UK niile nyochaa njirimara gị tupu ha enwee ike ịhapụ gị iji ọrụ ha. Nke a bụ usoro enweghị nsogbu - ọkachasị ọ bụrụ na ị na-eme ya site na ngwa ngwa ahịa mkpanaka. Ihe ị ga - eme bụ iji foto NJ gị nyere gị (paspọtụ ma ọ bụ ikike ịkwọ ụgbọala) ma bulite ya na ngwa ahụ.
Tradingfọdụ ngwa ahia ga-ajụkwa gị ka inyocha adreesị gị. Ọ bụrụ na ha emee, ịkwesịrị ịse foto nke akwụkwọ gọọmentị nke nwere aha na adreesị gị - dịka akwụkwọ ndekọ ego ma ọ bụ ụgwọ ọrụ.
Kwụpụ 5: Nkwụnye ego
N'oge a nke usoro nhazi usoro, ị kwesịrị ịnwe akaụntụ azụmaahịa na-arụ ọrụ nke egosipụtara nke ọma. Ya mere, ị nwere ike ịga n'ihu itinye ego ụfọdụ. Dabere na ore ahia na ajụjụ, ị nwere ike ime nke a site na debit / kaadị akwụmụgwọ. Ọ bụrụ otu a, ọ ga - abụ na Google Pay ma ọ bụ Apple Pay ga - enwe ike ịhazi usoro a maka gị.
N'aka nke ọzọ, enwere ike ịchọrọ gị itinye ego site na nnyefe ego. Ọ bụrụ otu a, ị nwere ike ichere ụbọchị ole na ole ka ego wee kpochapụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ịnwere ike itinye ego site na e-obere akpa dị ka PayPal ma ọ bụ Skrill, nke na-abụkarị ngwa ngwa.
Nzọụkwụ 6: Ịmalite ahia
Ozugbo e debere nkwụnye ego gị, ị ga-adị njikere itinye iwu mbụ gị. Imirikiti ngwa ahia na-enye gị ohere ịchọ akụ ma ọ bụ ngwa ego ịchọrọ ịzụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụ ahịa GBP / USD, nanị chọọ ego ụzọ ahụ, a ga-akpọrọ gị gaa na peeji nke azụmaahịa.
Dị ka akụkụ dị n'akụkụ, ọ ga-akacha mma ịmalite site na obere nha azụmaahịa ruo mgbe ị ga-enwe nkasi obi na ngwa ahia ị họọrọ. Nke a bụ n'ihi na ị ga - azụ ahịa na obere ihu karịa ka ị nwere ike iji.
Kedu akụ enyere ngwa ahia ahia na-enye?
Ngwa ahia ahia na-enye gị ohere ịzụ ahịa otu akụ ahụ dị ka achọtara na ntanetị desktọọpụ nke onye na-ere ahịa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-eji ọkachamara ọkachamara na-edepụta aha 100+, ụzọ abụọ ndị a ga-adị iji zụọ ahịa site na ngwa mkpanaka.
O sina dị, n'okpuru anyị edepụtara ụdị akụ dị iche iche ị ga - enwe ike ịzụta ma ree na ngwa ahịa azụmaahịa.
Imirikiti ngwa ahia na-edepụta ọtụtụ puku ebuka na mbak site n'ọtụtụ ahịa. Ma ọ dịkarịa ala, nke a kwesịrị ịgụnye isi mgbanwe ngwaahịa dịka NASDAQ, New York Stock Exchange, London Stock Exchange, na Tokyo Stock Exchange.
Offọdụ n'ime ngwa ahịa azụmaahịa kachasị mma ga-ejikwa azụmaahịa ngwaahịa si n'ahịa na-erughị mmiri. Nke a nwere ike ịgụnye mgbanwe na Australia, Canada, Singapore, ma ọ bụ Hong Kong.
Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ngwa ahia ga-enyekwa ngalaba ngalaba ọhụụ. Nke a ga - enyere gị aka ịzụta ma ree ọtụtụ ego ego site na ndị isi, ụmụ aka, na exotics.
Naanị jide n'aka na ị ga-elekwasị anya na mgbasa mgbe ị na-azụ ahịa azụmaahịa site na ngwa mkpanaka gị - ọkachasị n'azu elekere ahịa.
Y’oburu n’inwe uche tulee na onu ahia puru-nde ijeri, otutu ngwa ahia gha anabata otutu ahia. Na ngalaba ike, nke a kwesịrị ịgụnye iche iche mmanụ ahịa, yana gas.
O yikarịrị ka ị ga-ahụ ikpo ahịa dị na mpaghara ọla ndị dị oke ọnụ ahịa - dịka gold, silver, na platinum.
Ego gbanwere (ETF) na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere akụ, ma ọ bụ otu akụ, na-enweghị n'ezie ịnweta ya. ETF na - ahụ naanị ọnụahịa nke ụwa maka ihe a na - ekwu, nke na - enye gị ohere ịga ogologo oge na obere.
Ahịa ETF a ma ama na ngwa ahia azụmaahịa gụnyere S&P 500, ọla edo, na Index Russell 2000.
Ọ bụrụ n’ịchọ ịzụ ahịa ebuka na mbak, ma na ị nweghị ahụmịhe achọrọ iji zụta ma ree ụlọ ọrụ ọ bụla, gịnị ma ị tụlee ihe ngosi ahịa ahịa ngwaahịa? Nke a bụ ebe ị na-atụgharị uche na ahịa ngwaahịa buru ibu site na itinye ego na ọtụtụ narị ụlọ ọrụ.
Nwere ike ime nke a site na otu azụmaahịa, yabụ na ọ dịghị mkpa iji oge awa na-nkwụsị ịtụkwasị ọtụtụ narị iwu. Indices na-ere ahịa na-ewu ewu gụnyere FTSE 100, NASDAQ 100, na Dow Jones.
Ngwa ahia na-enye gị ohere ịkọ nkọ banyere ọnụego ọdịnihu nke cryptocurrencies dị ka Bitcoin. Ga-enwekarị nhọrọ nke ịzụ ahịa abụọ crypto-to-fiat dị ka BTC / USD, ma ọ bụ crypto-cross ụzọ abụọ dị ka BTC / ETH.
Naanị cheta, ọ bụrụ na ị na-eji onye na-ere ahịa ọdịnala etinye ego na cryptocurrencies, ọ ga-emezu-na ị ga-eme ya site na CFD. Nke a pụtara na ị gaghị enwe ihe kpatara ya, kama nke ahụ, ị ​​na-ekwu naanị ọnụahịa ego dijitalụ n'ọdịnihu.
Kedụ ka m ga - esi họrọ ngwa ahia ngagharị?
Ọ bụrụ n’ịchọta ngwa azụmaahịa mkpanaka na-ezute mkpa ego gị, ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ọtụtụ narị ndị na-azụ ahịa ịhọrọ. Agbanyeghị, nke a na - emekwa ka o sie ike ịmata ụdị ikpo okwu ị ga - eso - ọ bụghị opekata mpe n'ihi na ngwa ahịa azụmaahịa abụọ abụghị otu.
Dịka, anyị ga-atụ aro ịgụ site na ihe ndị a tupu ibudata ma wụnye ngwa ahịa azụmaahịa ọhụrụ.
Mara: Ọ bụrụ n’inweghị oge achọrọ iji gụọ site na usoro ndị a ma mee nyocha nke aka gị, ị nwere ike ịhapụ ngalaba a ma gaa na ndepụta anyị nke ngwa ngwa azụmaahịa akwadoro.
Nke mbu, ikwesiri igba mbọ hu na ngwa ahia eji eji aka ha dakọtara na igwe ha. N'ọtụtụ oge, ndị na-ere ahịa n'ịntanetị ga-azụlite ngwa ahịa maka gam akporo na ngwaọrụ iOS, ọ bụ ezie na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eji ngwaọrụ nke dara n'èzí nke ụdị gam akporo / iOS, ị gaghị enwe ike ịzụ ahịa site na ngwa mkpanaka.
Ozugbo ị nyochachara ma ngwa ahụ adabara na ngwaọrụ gị. ị ga-achọ inyocha nzere nke onye na-ere ahịa. Na mbu nke ihe a kwesiri ibu nhazi iwu nke onye ahia ahia. Ọ bụrụ na ikpo okwu ahụ dabere na UK, mgbe ahụ ọ ga-adị mkpa ịnweta ikikere site n'aka Ndị Ọrụ Njikwa Ego (FCA).
Y’oburu n’inweghi n’aka ma onye ahia ahia jidere ikike FCA, inwere ike ichoputa ihe ndebanye na intaneti. Ọ bụrụ na ọ dị ka onye na-ere ahịa na-azụ ahịa na-enweghị nkwado usoro iwu achọrọ, zere ikpo okwu n'ozuzu ya.
Kwesịrị ịtụle otú usoro ego ga-esi rụọ ọrụ mgbe ị na-etinye ego site na ekwentị gị. Thezọ kachasị mfe iji mee nke a bụ site na Google Pay ma ọ bụ Apple Pay. Nke a bụ n'ihi na gị debit / kaadị nkọwa ga-akpaghị aka popula, ma n'otu oge ahụ na-echebe gị chebaara ego ozi site na-adịghị na-ezighi ezi aka.
N'aka nke ọzọ, onye na-ere ahia nwere ike ịkwado e-obere akpa dị ka PayPal, ma ọ bụ nyefee ụlọ akụ ọdịnala. Jide n'aka na-amata ma ahia ngwa ebubo ọ bụla ụgwọ ka na-edebe ego, na ma ọ bụla kacha nta itule chọrọ.
Ngwa ahia ahia na-abịa n'ụdị na nha. Ọ bụ ezie na ụfọdụ na-elekwasị anya na Forex, ụfọdụ na-ahụ maka cryptocurrencies dị ka Bitcoin na Ethereum. Kedu ụzọ ọ bụla, ịkwesịrị inyocha ụdị klas nke onye na-ere ahịa na-enye.
Ọzọkwa, ọ dịkwa mkpa ka ị chọpụta ókè ndepụta ego ya dị. Dịka ọmụmaatụ, ọ dị mma ma dịkwa mma ma ọ bụrụ na ngwa mkpanaka ahụ na-akwado Forex, mana enwere ike ịhapụ gị ma ọ bụrụ naanị na-akwado ndị isi abụọ.
Fe Ego ahia na Mgbasa
Ngwa ngwa ahia niile na-azụ ahịa na-azụ ahịa, yabụ ịkwesịrị inyocha otu onye na-ere ahịa na-ebo gị iji ọrụ ya. N'agbanyeghị ụdị akụ ị chọrọ ịzụ ahịa, a ga-agbasa ụdị ụfọdụ. Nke a bụ ihe dị iche na ọnụahịa 'ịzụta' na 'ere'.
Nnukwu mgbasa ahụ, akụ dị oke ọnụ bụ ịzụ ahịa. Ka o siri dị, ngwa ahịa azụmaahịa kachasị mma ga-enye mgbasa siri ike. N'otu aka ahụ, jide n'aka na ị ghọtara usoro ọrụ onye na-ere ahịa. Ezie na ụfọdụ agbanwe na-enye ọrụ-free trading, ndị ọzọ ga-ana gị a agbanwe ego dabere na size nke gị ahia.
🥇 Enyi na Enyi
Ọ bụ ezie na ngwa mkpanaka nwere ike ịpụta site na ịnye ọtụtụ puku akụ na ala na-agbasa, ịkwesịrị ịchọpụta etu ngwa ahụ si bụrụ enyi-enyi. Ka emechara, ị ga-azụ na nge ihuenyo nke pere mpe karịa ngwaọrụ desktọọpụ ọkọlọtọ, yabụ ọ dị oke mkpa na ngwa ahụ na-enye ahụmịhe ahịa na-enweghị ntụpọ.
Ọbụghị naanị na nke a gụnyere mpaghara azụmaahịa n'onwe ya, kamakwa ikike ịkwapụ site na akụ bara ụba, yana ịmalite itinye ego na iwepụ ego.
Enwere ike ịbịa oge oge ịchọrọ enyemaka n'oge. Ọ bụrụ na ị na-achọ iji gị họọrọ ore ahia isi site na ekwentị mkpanaaka gị, wee hụ na ị na-enwe ike ịkpọtụrụ nkwado site na trading ngwa. Nke a ga-abịa n'ụdị nkata ndụ ma ọ bụ email.
5 Ngwa ahia ahia kacha mma na 2021
Ọ bụ ezie na anyị ga-atụ aro iji ngalaba ahụ dị n'elu iji nyochaa onye na-azụ ahịa ị họọrọ n'adabereghị, n'okpuru, anyị edepụtarala ngwa ahịa azụmaahịa 5 kacha elu nke 2021. Nkwado ọ bụla na-eleba anya n'otu mpaghara nke ebe ahia n'ịntanetị - dị ka ngwa kachasị mma maka ndị mbido, ebuka, Forex, na Bitcoin.
Ọ bụrụ n’ị gụọ akwụkwọ ntuziaka anyị na ngwa ahia kachasị mma nke 2021 site na mbido ruo n’ọgwụgwụ, ị kwesịrị inwe ngwa achọrọ iji chọta onye na-ere ahịa na-egbo mkpa gị Dịka anyị kwurịtara na ntuziaka anyị niile, ịkwesịrị ijide n'aka na ikpo okwu karịrị n'ọtụtụ ebe - dịka iwu, ụgwọ, mgbasa, ngwa ngwa, na nkwado ndị ahịa.
Site na nke a, anyị depụtakwara ihe kacha mma anyị na-azụ ahịa maka ngwa ahịa 5 maka gị nke na-enweghị oge ịchọta ikpo okwu n'adabereghị. Nke a gụnyere ngwa ahia maka ndị ọchụnta ego ọhụụ, yana ngwa kachasị mma maka azụmaahịa azụmaahịa, ebuka na Bitcoin.
1. eToro - Usoro ahia kachasị mma maka ndị mbido
Mgbasa nwere ike ịdị elu na klaasị na-erughị mmiri mmiri
3 Capital.com - erolọ Ọrụ Zero na Ultra-Low Spreads
Kedu usoro ịkwụ ụgwọ nke ngwa ahia azụmaahịa na-enye?
Nke a ga-adị iche na ngwa-gaa-na ngwa. Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na ajụjụ na-anabata debit / kaadị kredit, mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ike itinye site na Google Pay or Apple Pay. N'aka nke ọzọ, ịnwere ike itinye ego na akụ ma ọ bụ obere akpa.
Ego ole ka ngwa ahia ahia na-enye?
Nke a ga-adabere na ebe ị dabere, ụdị akụ ịchọrọ ịzụ ahịa, yana ma ị bụ onye na-ere ahịa ma ọ bụ na-azụ ahịa ọkachamara. Na ngwụcha, ọ bụrụ na ị bụ onye ahịa na-ere ahịa nke gbadoro ụkwụ na UK, mgbe ahụ ị ga-ejedebe ókè iwu EMSA tinyere.
Ngwa ngwa ahia na-eji agagharị agagharị nwere ihe ndekọ ego kacha nta chọrọ?
Ọtụtụ na-eme. Nke a na-abụkarị uru kacha nta nke £ 100, ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị elu karịa.
Enwere ezigbo ngwa ahia mkpanaka maka Windows ekwentị?
Dị ka ọ dị na ọtụtụ ngwa mkpanaka n'oge a, ndị na-ere ahịa na-abụkarị ndị na-emepe ngwa maka gam akporo na ngwaọrụ iOS.
Kedu ọwa nkwado ndị ahịa na-enye ngwa ahịa azụmaahịa?
Fọdụ ndị na-ere ahịa ga-enye gị ohere ka gị na onye na-ahụ maka ndị ahịa na-ekwu okwu site na ọrụ nkata ndụ na ngwa ahịa gị. N'aka nke ọzọ, ị ga-eziga ozi-e ma ọ bụ kpọọ ụlọ ọrụ nkwado ozugbo.
Kedu ka m ga-esi chọta ngwa mkpanaka maka onye na-azụ ahịa m họọrọ?
Anyị ga-atụ aro ibudata ngwa mkpanaka ahụ na ebe nrụọrụ weebụ desktọọpụ nke onye na-ere ahịa gị. Wayzọ a, ị pụrụ 100% n'aka na ị na-na nbudata na ukara ngwa.
Ngwa ahia ahia na-enye ego?
Ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na ajụjụ na-enye ego na desktọọpụ desktọọpụ ya, mgbe ahụ ọ ga-abụ na ego ahụ ga-adịkwa maka ndị na-eji ngwa ahịa.